Torohevitra 5 momba ny fanoratana atiny marketing izay miteraka lanjan'orinasa | Martech Zone
Ny famoronana kopia marketing maharesy lahatra dia tonga amin'ny fanomezana lanja ny mpankafy anao. Tsy tongatonga ho azy izany. Raha ny marina, ny fanoratana atiny marketing izay hisy heviny sy misy akony ho an'ny mpihaino maro karazana dia asa goavana. Ireto torohevitra dimy ireto dia manome teboka fanombohana stratejika ho an'ireo vao manomboka ary manome fahendrena lalindalina kokoa ho an'ireo olona za-draharaha kokoa.
Soso-kevitra # 1: Atombohy amin'ny saina farany
Ny fitsipika voalohany amin'ny fahombiazan'ny marketing dia ny fahitana fahitana. Ity fahitana ity dia tsy maintsy mihoatra ny fivarotana vokatra sy serivisy, fa tsy mifantoka amin'izay fiantraikan'ny marika hanan'izao tontolo izao.
Tsy mila zavatra manova be izao tontolo izao izany. Ohatra, raha mivarotra kilalao horonan-tsary fanabeazana ho an'ny ankizy kely ny orinasa iray, dia mety hanana fahitana amin'ny fanomezana kilalao fanabeazana mahafinaritra indrindra na aiza na aiza eny an-tsena. Mety hidika amin'ny votoatin'ny fanoratana marketing izay mifantoka amin'io tanjona io, ohatra amin'ny fanoratana atiny mahatsikaiky izay mampianatra ny mpamaky zavatra mahaliana ihany koa.
Raha ity orinasa ity, mikendry ny hanabe sy hampiala voly ny mpihaino azy (na ny zanak'ireo mpihaino azy), dia manoratra prosa manana eritreritra mahasosotra, dia tsy hahomby izy ireo. Amin'ny alàlan'ny fanombohana amin'ny farany ny saina sy ny fananana vina, dia alohan'izy ireo hanao fampielezan-kevitra mahomby.
Soso-kevitra # 2: Mampiasà feon'ny olona iray ho an'ny kopia marketing rehetra
Ny kopian'ny marketing dia iray amin'ireo fotoana kely tokony hiresahan'ny orinasa mivantana amin'ny mpanjifany. Raha izany dia ilaina ny manalavitra ny marketing amin'ny komity. Raha olona folo no mila manaiky ny kopian'ny marketing alohan'ny hamoahana azy amin'ny besinimaro, dia tsy hisy fanantenana hamoronana atiny tsara.
Mila fahasahiana ny famelana ny olona iray na roa hamaritra ny toetran'ny fampielezan-kevitry ny marika iray manontolo. Misy antony mahatonga ny orinasa hanao izany, ary izany dia satria mandeha. Mazava ho azy fa tsara ny mijery ny kopian'ny marketing amin'ny voalohany. Tsy hevitra mahery vaika io ary tsy misy fanaraha-maso, fa fampahatsiahivana fotsiny ny fanasoavana ny fomba "hands off" isaky ny azo atao.
Soso-kevitra # 3: Mifantoha amin'ny fiovam-po
Tsara ny tiana sy ny fomba fijery, fa ny orinasa kosa tsy ho tafavoaka amin'ny lazany fotsiny. Fandrefesana ny fahombiazan'ny fitaovam-pivarotana mifototra amin'ny fomba hanovany ny prospect vaovao ho mpanjifa mandoa.
Atombohy amin'ny finiavana hanandrana sy hikaroka. Toy ny tip # 2 hoy izy dia avelao ny toetran'ny olona iray hitarika ny tonon'ireo asa soratra voalohany. Rehefa mandeha ny fotoana dia misy angona ampy hamakafaka, tonga ny fotoana ahazoana statistika sy hijerena ireo hetsika manokana azon'ny orinasa atao hanatsarana ny fiovam-po. Amin'ny farany, raha misy olona manao fampielezan-kevitra hampiova finoana ny mpanjifa mandoa vola, dia mandeha izany. Faran'ny tantara.
Soso-kevitra # 4: Mametraha fanontaniana
Ny olona amin'izao andro izao dia manantena ny ho tafiditra ao amin'ilay resaka. Rehefa mivarotra azy ireo ny marika iray amin'ny filazanao azy ireo izay tokony hatao, dia mety haneho hatezerana izy ireo. Aza mitady feo manana fahefana fa manandrama miteny amin'ireo mety ho mpanjifa mitovy aminy. Anontanio azy ireo ny hevitr'izy ireo. Raha tokony hiteny ianao hoe: "Ny soda anay no tsara indrindra ary mino azy kokoa ianao!", Mandehana amin'ny fomba malefaka kokoa toa ny "Ahoana ny hevitrao momba ny soda vaovao mahavariana anay?"
Mahatsiaro ho sadaikatra ny fametrahana fanontaniana amin'ny voalohany. Ny fanbase an'ny marikao dia mety tsy dia zatra amin'izany, ary hanandrana vitsivitsy vao hanomboka hamaly izy ireo. Aza adino fa tsy misy mahita ny fanontaniana tsy voavaly, ny resaka azo avy amin'ny andrana nahomby ihany no hitany.
Soso-kevitra # 5: Vantany vao mamaly izy ireo dia mitenena foana!
Tsy ampy ny mametraka ny fanontaniana ary mivoaka. Na dia tsy ilay olona nanoratra ny dika mitovy amin'ny marketing aza izy io, dia tokony hotendrena ny olona iray hanara-maso ireo sehatra media sosialy sy hamaly izay rehetra maneho hevitra.
Tontolo mitabataba ity, ary te ho fantatry ny rehetra. Ny zavatra tsotsotra toy ny "misaotra" avy amin'ny kaonty marika dia mety ho ny tsy fitovizan'ny mpankafy fanarahana na ny fomba fandefasana ary ny fividianana ny vokatrao.
Ny fanoratana atiny marketing dia dingana maharitra izay tsy hitovy amin'ny marika tsirairay. Mihainoa ny mpanjifanao. Mankanesa any amin'izy ireo miaraka amin'ny atiny mifandraika amin'izany, ary avelao ny olona iray hamaritra ny sary marketing an'ny marikao. Aza adino fa na inona na inona hitranga, ny dokambarotra tsy nahomby dia hihena tsy ho voamariky, ka aza matahotra ny manandrana hevitra sahisahy. Amin'ny farany, ny marika iray dia tokony hampiasa ny kopian'ny varotra aminy hifandraisany amin'ireo mety ho mpanjifa ary hamadika azy ireo ho mpikambana ao amin'ny fianakaviana.
Tags: fiovam-ponycopywritingtoro-hevitra fanoratanatoro-hevitra momba ny atiny marketingkopian'ny marketingtoro-hevitra amin'ny kopia marketingolanaWritingfanoratana hevitra